WARBIXIN: Waa maxay fariinta uu xambaarsanaa safarkii Farmaajo ee Beladweyne? – XAMAR POST
WARBIXIN: Waa maxay fariinta uu xambaarsanaa safarkii Farmaajo ee Beladweyne?
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Maxamed ayaa shalay indhihiisa ku soo arkay xaalad aad u adag oo ay ku nool yihiin kumanaan shacab ah oo ka mid ah Umadda uu hogaamiyo, waxa uuna ka soo laabtay isaga oo ka war qaba waxa looga baahan yahay iyo halka uu ka bilaabi karo go’aankaasi ku aadan wax u qabashada shacabka Daalan.
Madaxweynaha ayaa safar dhulka ah ku maray wadooyin ay buux dhaafiyeen Biyo ka dhashay Xareedii roobka oo ka soo hooray Buuraha ku teedsan magaalada Beladweyne iyo Biyo ka soo fatahay Wabiga Shabeelle ee gobalka Hiiraan, meelaha qaar Gaariga ayuu ka dagayay si uu ugu kuur galo Baaxadda dhibaatada.
Wadooyinkii uu soo maray qaarkood waxay ahaayeen meelo halis ah oo ay adagtahay inuu madaxweyne ku safro markii loo eego hirarka Biyaha iyo amaanka gobalka, hasa yeeshee kama baaqan go’aankiisii ahaa inuu xanuunka la soo qaybsado shacabka daalan Beladweyne, hareerahiisa waxaa taagnaa Ciidan iyo shacab u baahnaa inay arkaan Madaxweynaha Dalka si ay u dariinsiiyaan xaaladda ay ku nool-yihiin.
Madaxweynaha ayaa dul istaagay xaafadaha qaar ee uu Biyaha Wabiga saameeyay waxa uuna su’aalo ku saabsan musiibadaas ka wareestay Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo Odayasha dhaqanka ee ku nool Magaalada, waxa uuna u balan qaaday in si deg deg ah usoo gaari doonto Gacanta Dowladda Soomaaliya si looga saaro dhibaatada ay ku nool-yihiin.
Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa booqday Xeryo ku yaala duleedka magaalada oo ka sameysan Xerko, dhar iyo tiirar yar yar oo laysku xiray kuwaas oo ay deegan sanayaan kumanaan ka barakacay Muusabada ka taagan magaalada Beladweyne, waxa uu u sheegay dadkii uu la kulmay Madaxweynaha Soomaaliya inuu la qaybsanayo dhibaatada haysata ujeedada safarkiisa uu qatarta ugu soo bareerayna ay tahay kaliya inuu soo arko xaaladda Reer Beladweyne lana ogaysiiyo in Dowladda ay ka warqabto gaar gaarna saacadaha soo aadan uu soo gaari doono.
Haween, Carruur iyo dad waayeelo ah oo daalan ayuu la kulmay Madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo dhaxan iyo qabow badan waayo joog u ahaa habeenadii la soo dhaafay kadib markii ay ka soo cararayn dhibaatada magaalada ka jirta waxa uuna mid mid u gacan qaaday qaar ka mid ah dadkii dhibaateysanaa ee ku sugan duleedka magaalada Beladweyne ee xarunta Gobalka Hiiraan.
Dadka ku nool magaalada Beladweyne ee xarunta Gobalka Hiiraan inay la kulmaan Madaxweynaha Soomaaliya waxay u ahayd maalin wanaagsan sababtoo ah waxay ka mid yihiin reer Beladweyne dadka wajahayaa dhibaatada ugu badan ee maanta ka jirta Soomaaliya gaar ahaan Siyaasadda, amaanka, dhaqaalaha iyo Muusiibooyinka Bini-aadinimo ee Soomaaliya ka jira kana dhashay Roobka Gu’ga.
Carruurta qaar ayaa wadada kaga hortagay Madaxweynaha Soomaaliya waxayna u ahayd Markii ugu horeysay oo ay Toos u arkaan Madaxweyne Farmaajo hasa yeeshee waxay ku soo beegan tahay Saacado aan damaashaad ku gelin Shacabka Magaalada oo daal iyo rafaad badan uu ka muuqdo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xaalad Musiibo Qaran ah kaga dhawaaqay Beladweyne waxa uuna ka dalbaday Dhamaan shacabka Soonaaliyeed ee ku sugan Dal iyo Dibadba inay ka qayb qaataan samata bixinta Shacabka Gobalka Hiiraan, isagoo faray Guddigii dhawaan la magacaabay in si deg deg lagu bixiyo wax kasta oo keyd ah oo ay heyso Dowladda Soomaaliya si loo badbaadiyo dad sii dabar go’aya oo dhibaato Culus ay heysato.
Waxyaabaha uu amray in la bixiyo kaliya maahan Cunto ee waxaa ku jira Dawo, iyo Teendhooyinka Barakacayaasha kuwaas oo ku wajahan magaalada Beladweyne ee Xarunta Gobalka Hiiraan kana soo geli doono dhinaca Galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya.
Carruurta qaarkood ayuu ugu galay Guryo ay daganaayeen waxaana si gaar ah ula kulmay Carruur xanuunsan oo ku nool deegaanada lagu Barakacay ee gobalka Hiiraan ee Bartamaha Soomaaliya.
Dadka ka faalooda Arimaha amaanka ayaa safarka Madaxweynaha ee Beladweyne shalay ku tagay ku tilmaamay fariin mug weyn Xambaasran oo lagu soo jeedinyay hay’adaha samafalka iyo dadka wax heesta ee Dalka iyo Dibadda ku nool si arintaan loogu wajaho wadajir iyo Taageero Qaran.
Qubarada amaanka ayaa sheegay in Madaxweynaha uu u bareeray Xaalad Qatar ah uuna soo maray wadooyin ay dhowjeer weerarayn Al-shabaab sidoo kale uu soo dhaxmaray Wadooyin ay buux dhaafiyen Biyaha Wabiga, oo aad u xooganaayeen Hirarka Biyaha, Madaxweyne Farmaajo uma muuqan Qatarahaas oo dhan balse ujeedkiisa ayaa ahaa inuu soo arko Xaaladda Beladweyne.
In Magaalada Beladweyne ee Xarunta gobalka Hiiraan Booqosho ku tago waxay ka dhigan tahay inuu Booqday meel ka mid ah Hirshabeelle oo ahayd maamulka Kaliya ee aan waali Socdaal ku tagin Madaxweynaha Soomaaliya, Farmaajo ayaa hore usoo booqday Koofur Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo Puntlanad waxa uuna deegaanada qaar ku soo qaatay habeeno iyo maalmo badan.
Sidoo kale Safarkii shalay ee Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ahaa Booqashadii ugu horeysay ee uu ku tago deegaan ay Muusiibo ka jirto si loo Caawiyo dad badan oo dhibaataysan, waxa uuna maamulka Hirshabeelle ku dhiira geliyay in Shabaab laga saaro Gobalada Soomaaliya gaar ahaan Hirshabeelle.